Home » Featured » #NABSHOWNY Dhiirrigelinta $ 100: NY GOOBTA SHABAKADAHA CUTUBKA, NAB SHOW NEW YORK & AES Exhibitions
Waqti ayaa weli ka tagaya helitaanka $ 100 ee kaadhka shirarka buuxa ee 2 (si joogto ah $ 895) si fudud adoo isticmaalaya code PP27. Dalabkani wuxuu dhacayaa 9.13.2018 (haa, taasi waa maanta). Sidaa daraadeed dadka ugu baaqaya in ay ku noolaadaan inta badan, tani waa fursada ugu dambaysa ee aad ku badbaadin karto $ 100.00 oo u isticmaal lacagtaas si aad u cunta cunto quraac fiican leh bartamaha magaalada. Tag halkan: www.nabshowny.com/conference/postproduction-conference-nyc
#NABSHOWNY 2018 way socotaa Oktoobar 17th-18th at the Javits Xarunta NYC oo ay ku jiraan kheyraad. Barnaamijyada muhiimka ah ee bartilmaameedka gaarka ah, shirarka, iyo Shirka Wax-soo-saarka Dib-u-dhajinta ayaa leh dhowr goobood oo cusub oo ah sida: HDR Video Essentials / Talooyin loogu talagalay Premiere Pro iyo Iskuxirka Warbaahinta, iyo Darajo la leh Premier Pro! Tababarka Dabagalka Tababarka waxaa lagu soo saaraa wadashaqeyn Mabaadiida Warbaahinta ee mustaqbalka, kaas oo ku qaadan doona koorso tababar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala heer dhexdhexaad ah oo ay ku jiraan filimka, TV-ga iyo tifaftireyaasha fiidiyowga, naqshadeeyayaasha garaafka, sawirleyda iyo wax soo saarayaasha. Sidoo kale, ha seegin New York Broadcaster of Year, David Muir, ABC World News Tonight Anchor ee shir beegtiga ah oo noqon doona mid wargelin iyo xiiso leh.
Macluumaad faahfaahsan ayaa la bixin doonaa maalmaha soo socda ee keenaya Apple Big NAB Show dhacdo. Sidaa darteed iska ilaali! Beatka Warbaahinta fiidiyoowgu wuxuu noqon doonaa daboolka dabiiciga ah ee ururinta wareysiyo fiidiyoow ah oo badan oo ay tahay in ay u arkaan xirfadlayda warshadaha. Iska hubi in aad eegto vidiyadayada video-ga ah ee loogu talagalay macluumaadka kor u qaadi doona fahamkaaga ku saabsan hoggaamiyeyaashan qiimaha leh iyo kuwa warshadaha ee tiknoolajiyada!
Waa kuwan sawirka 2017 #NABSHOWNY:
Waxaa soo saaray Ururka Qaranka ee Wargeysyada oo la wadaago Audio Engineering Societyshirkii East Coast, NAB Show New York waxaa la qaban doonaa Oktoobar 17 - 18, 2018 Javits Xarunta Shirarka. Iyadoo ay ka badan tahay kaqeybgalayaasha 14,000 iyo bandhigayaasha 300 +, NAB Show New York ayaa soo bandhigeysa ugu fiican tiknoolijiyadda soo socota ee warbaahinta, madadaalada iyo xirfadlayaasha telecom oo leh shirar iyo seminaaro diirada lagu saarayo telefishanka, filimada, satellite, video online, dhacdooyinka nool, podcasting, xayeesiin, shirkad A / V, wax soo saarka iyo boostada.
Broadcast Beat waa Idaacadda rasmiga ah ee 2018 ah NAB Show Las Vegas iyo ahaysiinnay ah NAB Show LIVE. In 2017, NAB Show LIVE heshay 1.3 million daawadayaasha online iyo inta lagu jiro 2018 ah NAB Show, Ayaa la filayaa in aan ka badnayn 1.5 million daawadayaasha.
Alan Alda to Receive the NAB 2019 Distinguished Service Award - January 22, 2019
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB Show Las Vegas NAB Show Diiwaangelinta NAB16 nabshow National Association of warbaahinta Show	2018-09-13
Previous: Sohonet wuxuu ku dhawaaqay ClearView Flex Iskaashiga Iskaashatada Real-Time ee La Fulin karo
Next: Grass Valley iyo Populous waxay suurtagelisaa inay Awors Stadium Isticmaalaan Arlington Texas si ay u bixiyaan waaya-aragnimo cajiib ah oo kamarad ah si ay u qabtaan